रबि लामिछाने-धुर्मुस भेटघाट सम्पन्न, ‘सेन्टी भाईरस’ हेर्न सवैलाई आग्रह! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
रबि लामिछाने-धुर्मुस भेटघाट सम्पन्न, ‘सेन्टी भाईरस’ हेर्न सवैलाई आग्रह!
काठमाडौं । सिधाकुरा जन*तासंगका प्रमुख तथा कृतिमानी संचारकर्मी रबि लामिछाने र चर्चित कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) बिच आज न्युज २४ को कार्यालय मै भेटघाट भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माणमा अहोरात्र खटिनुहुने समाजसेवी धुर्मुस का*र्यालयमै रबिलाई भेट्न पुगेका हुन् ।
संचार**कर्मी रबि लामिछानेले आफ्नो फ़ेसबुकबाट सिधा लाईभ गर्दै ‘सेन्टी भाईरस’ बारे जानकारी गराएका थिए ।विश्वभरबाट सवैले हेरिसकेपछी यो भेटले स्टेडियमको निर्माण मा थप उर्जा मिल्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
चलचित्र ‘सेन्टी भा**ईरस’ एकपटक सवैले हेर्नैपर्ने चलचित्र बनेको छ । यो चलचित्रबाट उठेको रकमले स्टेडियम बनाउन ठुलो सहयोग पुग्ने भएकाले एकपटक हलसम्म पुगेर सहयोग गरिदिन स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुबाट सवैलाई अपिल पनि गरिएको छ ।
रबि ले फेसबुक लाइभ मार्फत आग्रह गर्दै रंगशालालाइ सहयोग गर्न यो चलचित्रले राम्रो भुमि**का खेल्नेपनि बताउनु भएको छ । यहि फागुन ९ गते प्रदशनमा आउन लागेको चलचित्र सेन्टि भाइरस हेर्न सबैलाइ अनुरोध गर्नुभएको छ्।
Previous कोरोना भाइरसका कारण वुहान अस्पतालका निर्देशकको मृ*त्यु
Next अन्धकार हट्नेछ , अबको दुई बर्ष भित्रमा सबैको घर – घर मा विद्युत!